Umsebenzi oyinhloko abafundi - ukufunda kahle, ukujabulisa abazali nothisha. Kodwa ngaso sonke isikhathi ukuze isebenze amabutho akukwazi umkhawulo, futhi umphefumulo uqala adinga ukuphumula. Iholide phakathi kwengxenye Yiqiniso, kancane ngokukhanyisa izinsuku grey, kodwa ehlobo akukho okungathatha isikhala sokuqongelela.
Indatshana enesihloko esithi "Summer Holiday" - ithuba elikhulu ukuphupha ngani kulezi zinsuku enhle. Kuyinto edabukisayo ukuthi bona bengakaqali nakuqala ukuzijabulisa isikhathi eside kangaka ...
Umbhalo ehlobo kufanele kuqale ngesingeniso lapho ungakwazi ukuchaza ngokuningiliziwe lokho esesikwenzile futhi lokho abakufundile phezu emnyakeni lekufundvwa ngawo esikhathini esidlule. Sitshele mayelana umsebenzi wesikole awupheli, mayelana izifundo eziyisithupha noma eziyisikhombisa nsuku zonke. Futhi lokho singabali iqanda lapho kufanele uvuke kusasele amahora amabili uqale! Chaza okwenzeka iqhaza imincintiswano, imincintiswano, usitshele umsebenzi ezithakazelisayo laboratory, vakashela imitapo, iminyuziyamu, imihlangano nabantu ezidumile. Funda Yiqiniso, uma kunesidingo, kodwa kuthatha kude amandla amaningi.
Indzaba "Ngingakujabulela achitha ihlobo" kuzosiza ukusiphazamisa futhi ukwenza amalungiselelo esikhathini esizayo esiseduze.
Mini-indzaba "Summer" ngeke akwenze ngaphandle engxenyeni eyinhloko lapho kukhona upende enemininingwane futhi ngokuphelele lonke. Ukuze incazelo yalo nzima kakhulu futhi kuyisicefe, kubalulekile ukuba bahlukanise bayifaka izigatshana eziningana.
Indzaba "Ngingakujabulela achitha ihlobo" kungenziwa kulekelelwa ingxenye, echaza umbono a tour kungenzeka. Khumbula ukuthi kwalotshwa eyayinesihloko esithi "Isikhathi sakho ozithandayo sonyaka - ehlobo" indzaba ngekota edlule, okuyinto izindawo ngayo lapha.
Khona-ke ukwenza Luhlatiyo lokho kwabonakala, lokho Ngiyakhumbula, isabelomali travel, ukutholakala kwezithuthi. Futhi ukuba bazinqumele ukuthi kunengqondo uvakashele lesi simanga.
Indzaba "Ngingakujabulela achitha ihlobo" kufanele ihlukaniswe izigaba. Le ndlela ukukhulisa Sakhiwo setheksthi futhi lula ukuqonda umfundi.
Ngiyiphi inarha lapha yilona resort. Uma phesheya - kungakhathaliseki visa kuyadingeka futhi ukuthi kukhona iphasiphothi. Ingabe abazali bakho uhambe? Ingabe ukukhishwa eyodwa noma kudingeka ukuncenga abangane nofunda nabo? Ingabe isithiyo kuyoba yolimi?
Indzaba "Ngingakujabulela achitha ihlobo" kuyobe akuphelele ngaphandle kwencazelo umzila enemininingwane kusikhungo sosizo ukuze uya khona.
Uma isikhwama libuthene, isihambi eya esiteshini sesitimela, ibhasi siteshi noma esikhumulweni sezindiza. Izindlela zingase zihluke - itekisi, ibhasi Sibona, tram. Kulandele sokudlulisela isitimela, ibhasi noma indiza.
Kufanele uchaze ngokuningiliziwe inqubo yokubhalisa yezisebenzi umngcele onogada kanye ezisebenzini zasemingceleni.
Indlela elula kancane ngenkathi elinde lokubikezela ... Hlobo luni imizwa ezimnandi bephelelwa amandla lapho ekugcineni ungathatha esihlalweni sakho!
Umhlangano endaweni oya kuyo
Ngezikhathi ezithile lapho izivakashi is akulindelekile. Noma ngabe uhambo olude noma ukuvakashelwa kugogo edolobhaneni, isihambi ngesikhathi ehlangana uya khona. Khona-ke qhubeka umzila wakho ukuya endaweni oya kuyo.
Ngemva kohambo olude, indoda kudingeka aphumule. Lokhu kungenziwa efulethini kwaqashwa a motel, ihhotela noma nezihlobo. Ngayinye yalezi ongakhetha uhlukile, ngakho izici ezithakazelisayo kuwufanele ukuchaza. Mhlawumbe lena yiyona ndlela kakhulu maphakathi edolobheni elidala. Futhi lesi sakhiwo wahlala emlandweni, futhi wanquma nekusasa lezizwe sonke.
Kufanele kutjhejwe izakhiwo esiyingqayizivele, abasebenzi friendly, ifenisha engavamile noma ubudala ikheshi creaky.
Mhlawumbe leli hhotela idume khona amandla angaphezu kwawemvelo. Zonke engavamile edonsela abantu. Ngakho-ke, incazelo eningiliziwe kanjani kwesitulo self-ezihambayo, kodwa ngoba izindonga ungezwa umsindo esiyinqaba, kumele usamukele.
"Isikhathi Izintandokazi konyaka" - indzaba lapho ukunakekelwa okukhethekile kufanele zikhokhelwe imizwa nemizwelo ukuthi ziyobheda isihambi. Yini okungavamile kufanele kuyamphahla, mangaza futhi umxhwele? In iyiphi indawo ungakwazi ukuthandana lapho uqala nje ukubona noma awuyithandi phakade. I kokuqala kubaluleke kakhulu.
Kungakhathaliseki ukuthi izingxenye zomhlaba ulilethele futhi phetho izivakashi, zonke izinto kuyoba indaba ezithakazelisayo, ositshela lwendawo novalo ethile.
Lokhu kungaba ukudalwa komuntu noma imvelo: umthombo, esifanekisweni, entabeni, intaba-mlilo, umfula, ichibi elihle, esigodlweni, umbhoshongo asekelayo, lokuhlala nosaziwayo noma inkwali umkhakha.
Ukuvakasha kungaba ezahlukene, futhi umuntu ngamunye izithakazelo esiyingqayizivele, hhayi kuyaqondakala kwabanye. Qiniseka ukuthi zihlanganisa kungani kufanele sinake lokhu Luhambo ube ncono kunaloko longiko, kanye nekutsi kungani ekhuthaza inengi labantu ngakho magange ukumbona.
Kwathi eseholidini, qiniseka ukuhlola inani elikhulu kunawo kungenzeka amaphuzu ezithakazelisayo. Lokhu kungasiza ukuvakasha.
Kungaba kuhlelwe njengoba abahamba ngezinyawo noma izithuthi ethize. With noma ngaphandle isiqondiso. Emini noma ebusuku. Dlala noma eside.
Nalapha futhi, kungani ihlelelwe ukhethe lolu hambo, ukuthi uluphi ulwazi kuhlelelwe ukuzwa?
cuisine Local kungaba colorful kakhulu. Kufanele uchaze ukuthi ingabe engavamile. Uyaya ukufunda izibuyekezo kusengaphambili "wahlangabezana 'noma ngeke ngokuyinhloko uncika kuwe umuzwa?
Indatshana ngekusasa ehlobo - akusiwona umqondo elula efana kungase kubonakale ekuqaleni. Kuyadingeka ukuba acabangele eziningi umehluko wemisindo nemiqondo yamagama kanye kahle ukuchaza kubo. Kodwa nge indlela efanele Kwakuwuhambo indaba ethakazelisayo. Futhi olandelayo "emihlanu" izovela idayari
Imidlalo yebhodi emibili - ikhambi elihle lokucindezeleka